Mmekọrịta dị n'etiti mmadụ, njem ndị ahịa, na ọrụ ọrịre | Martech Zone
Ndị otu ahịa azụmaahịa na-arụ ọrụ dị elu na-eji onye zụrụ ya, ghọta ịzụ njem, ma lelee ha anya ahịa funnels. M na-enyere idokwa a ọzụzụ ihe banyere mgbasa ozi ahịa dijitalụ na onye na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ mba ụwa ugbu a ma mmadụ rịọ maka nkọwa na atọ ahụ ka m wee chee na ọ bara uru ikwurịta.
Ezubere iche Onye: Onye na-azụ ahịa
Edere m na nso nso a na onye na-azụ ahịa na otu ha siri sie ike na mbọ ị na-agba ahịa dijitalụ. Ha na-enyere aka ma kee nkwukọrịta gị dabere na ọdịdị ala, ụlọ ọrụ, firmagraphic (B2Bnjirimara, ma ọ bụ nchịkwa (B2C) njirimara. Firmagraphic lekwasịrị anya nwere ike ịgụnye ma ọrụ azụmaahịa na ọnọdụ ọrụ.
Onye na-azụ ahịa na-enyere atụmanya gị ma ọ bụ ndị ahịa gị aka ịkọ nke ọma na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị dabere na mkpa na ụkpụrụ ha.
Gụkwuo Banyere yerzụ Personas
Icheta Mgbe: yingzụta Journeys
Yingzụta Journeys bụ nyocha ihe ogbo nke njem ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị na ma ị nwere ọkwa ndị ahụ na mbọ ahịa gị.
Ndị ahịa ịzụ njem dị mfe:
Na asịwo nwere nsogbu ha na-eme nyocha.
Na asịwo nnyocha dị iche iche ngwọta maka nsogbu ha.
Buzụ ahịa na-ewuli ndepụta nke chọrọ na azịza ya ga-ezute.
Onye nzụrụ ahịa na-enyocha ulo oru na / ma ọ bụ ngwaahịa ha ma ọ bụ ọrụ ha.
Buyingzụ ahịa njem nwere ike ịgbakwunye di na nwunye ọzọ dị ka mkpebi mkpebi a na-emekarị ka a otu gburugburu ebe onye na-eme nnyocha na-achọrọ iji jikọta ozi na-ewetara ya esịtidem maka nyochaa si ọzọ mmetụta na otu isi na-eme mkpebi:
Ndebanye aha nke nsogbu, ngwọta, na ihe ndị a chọrọ.
The nkwenye nke a na-eme mkpebi nzụta gafee ndị otu metụtara na ndị na-eme mkpebi.
Ha abụọ nwekwara ike ịhapụ mkpebi ndị ahịa, consumer chee echiche banyere di na nwunye ịzụrụ ụgbọ ala ọzọ. Di ma ọ bụ nwunye nwere ike ịnakọta ozi niile, soro ezinụlọ ya kwurịta ya, wee bịarute na nkwenye.
Gụkwuo Banyere Okporo Buzọ njem
Mmekọrịta dị n’etiti onye na - azụ ahịa na njem onye na - azụ ahịa bụ na ọ bụ matrik ahụ ngalaba ngalaba ahịa gị ga - eji na - ewepụta ọdịnaya gị, nkwalite ya na atụmatụ gị.
Have nwere atụmatụ inbound na outbound nke na-elekwasị anya na mmadụ ọ bụla na njem ọ bụla? Nwere ike ịchọta gị ebe ndị na - azụ ahịa na - enyocha ọkwa ọ bụla nke njem ahụ? Ọ na-enye aka n'ụzọ dị egwu ịmepụta matrik a n'ụzọ nkịtị. Maka mgbasa ozi, ọ bụ mkpọsa ị na-ewepụta. Maka usoro nyocha na ịzụ ahịa ọdịnaya, ọ bụ gị Ọbá akwụkwọ ọdịnaya.
Ebubata Ego: Ego Azụmaahịa
Buyingzụta njem bụ ọkwa nke onye zụrụ gị bụ… olulu ahịa bụ ihe onye na-azụ ya gbasara etu ha si nwee mmekọrịta na ịzụta. Ngosiputa ihe a di oke onu ahia nke n’enye ndi ahia na ndi ahia ka ha leba anya n’igwe na ire ahia ha bu nke bu onu ogugu onu ogugu na uzo ha si zuta.
Sales funnels bụ a anya na-achọ site na nzukọ azụ site na ịzụ usoro si n'ọnọdụ nke enwere ike ịmepụta ego. Yingzụta njem bụ a anya na-atụ anya zuo si n'ọnọdụ nke asịwo na ha ga-ekwe omume ịzụta.
N'ihi echiche dị iche iche nke ọ bụla, ọ dịchaghị nkenke nkenke n'etiti ha abụọ. Examplesfọdụ ihe atụ:
Onye na-azụ ahịa na-enyocha nsogbu ha nwere (Buzụ Njem Nkeji 1) ma ị nwere akwụkwọ ọcha zuru oke na isiokwu nke na-akụziri ha ihe n'ụzọ zuru oke, na-enye azịza, ma na-eme mmetụta dị ịtụnanya na ha gbasara ọrụ ụlọ ọrụ gị. Ha bu n'obi (Ogwurugwu Oru ahia D) ịzụta ngwaahịa gị ọ bụrụhaala na nyocha ahụ na-aga nke ọma.
Onye na-azụ ahịa nwere ike ịghọ maara (Ogwurugwu Oru A) nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na ngwọta frasi (Buzụ Njem Nkeji 4). Ikekwe ha achọpụtawo nsogbu ahụ, wuo ihe ndị a chọrọ, wee chọta akụkọ nyocha ma ọ bụ isiokwu ndị na-ekwu maka ngwọta dị na ahịa.
Otu onye otu nwere ike inwale azịza gị (Ogwurugwu Ogwurugwu Oge E) wee laghachi n'òtù ahụ ma wepụ ihe ngwọta gị (Zụ Njem Nkeji nke 6) maka efu ma ọ bụ arụmọrụ akọwapụtara.
Onye na-azụ ihe na-achọ ihe nwere ebumnuche ịzụta (Ogwurugwu Oru ahia D), gosipụtara njirimara gị, nyocha, na ọnụahịa gị.Buzụ Njem Nkeji 5) na-agbakwunye ngwaahịa ahụ na ụgbọ ala ha ma hapụ. Send na-ezitere ha ozi ịntanetị ịhapụ ụgbọ na mgbe ha nwere mmefu ego, ha na-azụ ihe.
Oge oge bụ ụzọ ọzọ na e nwere ihe ndapụta n'etiti ha abụọ. Fọdụ ndị na-azụ ahịa nwere ike were izu 2 kpebie ịzụrụ ihe. Ndị ọzọ nwere ike ichere ruo otu afọ tupu ha ekpebie ịzụta. Onye ọ bụla na-agagharị site na njem ndị ahịa na ọfụfụ ahịa gị na ọsọ ọsọ dị iche iche.
N'ihi nke a, ndị ahịa gị nwere ike itinye nnukwu nlebara anya maka ịmetụta ọ bụla nke njem onye na-azụ ahịa iji bulie onye ahụ (na ọsọ ha) site n'otu ogbo gaa n'ọzọ ọzọ. Nke a anaghị eme mgbe niile linearly… a asịwo nwere ike ịkpali azụ na-apụta n'etiti asịwo njem nkebi karịrị oge.
Agbanyeghị, ndị ahịa gị na-elebara anya nke ọma oge-na-emechi ma na-adọta atụmanya ahụ site na ọnụọgụ ahịa ka ha wee nwee ike ịkọ ego ha ga-enweta (na ikike ọrụ). Gị ahịa otu nwetara na atụmanya n'ime nso nke akara… ugbu a ha na-itinye nsogbu na-enye ihe onwunwe iji nweta ndibiat ke ọgwụgwụ-mpaghara.
You na-ahụ ka ha abụọ anaghị akwụ n’ahịrị
N'iji anya nke uche ma tụọ ọwara ahịa gị dị oke mkpa iji rụọ ọrụ ego gị na arụmọrụ zuru oke nke azụmaahịa na mbọ gị. N'ozuzu, ị chọrọ ijide n'aka na ị nọ akpụ akpụ ndu ọ bụla ruru eru site na otu ọkwa nke olulu ahịa na-esote.
Nke a ga - enye ngalaba ahia gị na azụmaahịa gị obi ike na ohere ị ga - enweta na - aba ụba na - abawanye.
Gụkwuo Banyere Funnels
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ enyemaka n’inyocha ọba akwụkwọ ọdịnaya gị na nyochagharị ihe gbasara onwe gị na nkebi gị, wee mejuputa ndozi ọrịre iji tụọ mbọ azụmaahịa gị, mee ka m mara! Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgwa m gbasara iwulite mmemme omenaala maka nzukọ gị nke a zụrụ azụ, biko kpọtụrụ m. Maka ọtụtụ ndị ahịa, m na - eme ma - na - ahụ maka ma na - enyere ha aka iwulite usoro ahụ yana ịkụziri ndị ọrụ ha etu esi eme, tụọ, ma bulie usoro azụmaahịa gị.
Tags: mgbasa ozi mgbasa oziasịwo njemonye zụrụ yaỌbá akwụkwọ ọdịnayandị mmadụụlọ nkwonkwo ahịapipeline ahịandị na-ege ntị
Isi isiokwu, mana ị nwere ike ịgwa ya na ọ bụghị nyochagharị.
Ọ bụrụ na m nwere ike imeli a proofreader na nchịkọta akụkọ!